लकडाउनकै समयमा पेट घटाउने हो ?गर्नुहोस् यी ५ अभ्यास - Tufan Media News
२९ चैत्र २०७६, शनिबार ११:२१
बाहिर पुटुल्क निस्केको पेट घटाउन कसलाई मन नहोला र ? तर कामको ब्यस्तता तथा अनेकौं उल्झनले बढेको पेट घटाउने चाहना पुरा हुन पाउदैन । अझै बाहिरको खानपानले आफूलाई फिट राख्न नसक्नेका लागि यो सुनौलो मौका हो । अहिले ल कडाउनको बेला मौका छोपेर तपाईले आफ्नो वजन घटाउने चाहना पुरा गर्न सक्नुहुन्छ ।
ल कडाउनको बेला घरभित्र रहदाँ बढेको पेट घटाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । ल कडाउन वजन घटाउने चाहना राख्नेहरुका लागी सुनौलो मौका हो । यस मौकामा घरभित्रै तपाई निम्न अभ्यासबाट पेट घटाउन सक्नुहुनेछ ।
२. रेगुलर क्रन्चेज
रेगुलर क्रन्चेज क्यालोरी बर्न गर्न सबैभन्दा उत्तम एक्सरसाइज मानिन्छ । यो क्रन्चेजको पोजिसनमा शरीरका कैयौं मांसपेशि एक साथ एक्टिभ हुने भएकाले फ्याट कम गराउन मद्दत गर्दछ ।
३. बाइसाइकल क्रन्चेज
ससर्ती हेर्दा बाइसाइकल क्रन्चेज सजिलो देखिए पनि गर्नमा भने यो निकै ग्राहो हुन्छ । यो एक्सरसाइज गर्दा शरीरमा निकै बल पुग्छ । जसले पेट र थाईमा जम्मा भएको बोसो कम गराउँछ ।
४. क्रन्च ट्विस्ट
क्रन्च ट्विस्ट एक्सरसाइज गर्दा पेटको साइडमा जम्मा भएको फ्याट कम हुन्छ । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार दैनिक तीन पटक भन्दा बढि क्रन्च ट्विस्ट गरेमा पेटको साइडमा भएको फ्याट कम हुन्छ ।
५. भर्टिकल लेग क्रन्च
भर्टिकल लेग क्रन्च एक्सरसाइज गर्दा शरीरलाई ब्यालेन्स गराउँदै खुट्टा उठाइन्छ । दैनिक १० पटक यो एक्सरसाइज गरेमा पेटमा जम्मा भएको बोसो छिटोभन्दा छिटो घट्दछ । लकडाउनका दौरानमा शरीरमा भएको मोटोपना वा बोसो कम गर्न एक्सरसाइजका साथसाथै केहि डाइटहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ । यस अलावा आफ्नो जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
१. एक्सरसाइज गर्दाको समयमा भुलेर पनि तारेको खाना खानुहुदैन । २. मोटोपना कम गर्ने सोच भएकाहरुले जंक फूड खानबाट बच्नु पर्दछ । ३. खाना खाएपछि बस्ने वा सुत्नुको सट्टा आधा घण्टा सिढि तलमाथि गर्नुपर्दछ । ४. भोक लाग्दा नखाई बस्नु भन्दा पटक पटक बरु कम खानु पर्दछ । ५. अत्यधिक टिभि हेर्ने, मोवाइल चलाउने कामलाई बन्द गर्नपर्दछ ।
यो समाचार पढ्नुहोस
काठमाडौं, २९ चैत । चीनको वुहानबाट फै लिएको को रोना भा इरस (को भिड १९)को सं क्रमणबाट विश्वभर ज्या न गु माउनेको संख्या एक लाख नाघेको छ । वल्र्डोमिटर्स डट इन्फोको ताजा अपडेट अनुसार विश्वमा को रोना सं क्रमणका कारण एक लाख दुई सय ६० ले ज्यान गु माइसकेका छन् । त्यस्तै, सं क्रमितको संख्या १६ लाख ४७ हजार ६ सय ३५ पुगेको छ, भने निको भएर फर्कनेहरुको संख्या ३ लाख ६९ हजार १ सय १६ पुगेको छ । यसैबीच, ४ लाख ६९ हजार ३ सय ७६ वटा को रोना सं क्रमणको के स पूर्ण रुपमा ब न्द भइकेका छन्, भने ११ लाख ७८ हजार २ सय ५९ वटा केसहरु एक्टिभ रहेका छन् ।
को भिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘विश्वव्यापी म हामारी’को सङ्ज्ञा दिएको छ । सोही बमोजिम सतर्कता अपनाउन पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका सबै देशका नागरिकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । यद्यपि इटाली, स्पेन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस भा इरसका कारण भ यावह स्थिति भएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म इटालीमा ज्या न गु माउनेको संख्या १८ हजार ८ सय ४९ पुगिसकेको छ । त्यस्तै सं क्रमितको संख्या १ लाख ४७ हजार ५ सय ७७ पुगेको छ, भने निको हुनेको संख्या ३० हजार ४ सय ४५ पुगेको छ ।
त्यस्तै, स्पेनमा ज्या न गु माउनेको संख्या १५ हजार ९ सय ७० पुगिसकेको छ, भने सं क्रमितको संख्या १ लाख ५७ हजार ५३ पुगेको छ । यसैबीच ५५ हजार ६ सय ६८ जना निको भइसकेका छन् । यता संयुक्त राज्य अमेरिकामा ज्या न गु माउनेको संख्या १७ हजार ९ सय १९ पुगेको छ । सं क्रमितको संख्या ४ लाख ७८ हजार १ सय ०९ पुगेको छ, भने निको हुनेहरुको संख्या २६ हजार १ सय ६ पुगेको छ ।
फ्रान्समा पनि को रोना सं क्रमणका कारण १२ हजार २ सय १० ले ज्या न गु माइसकेका छन् । त्यस्तै, सं क्रमितको संख्या १ लाख १७ हजार ७ सय ४९ पुगेको छ, भने २३ हजार २ सय ०६ निको भइसकेका छन् । यूकेमा पनि ज्या न गु माउनेको संख्या ८ हजार ९ सय ५८ जना पुगिसकेको छ, भने सं क्रमितको संख्या ७० हजार २ सय ७२ पुगेको छ । यसैबीच १३५ निको भएर फर्किएका छन् ।
यता इरानमा पनि ४ हजार २ सय ३२ ले ज्या न गु माइसकेका छन्, भने सं क्रमितको संख्या ६८ हजार १ सय ९२ जना पुगेको छ । यसैबीच ३५ हजार ४ सय ६५ निको भइसकेका छन् । चीनमा भने ज्या न गु माउनेको संख्या आज १ जना थपिएको छ । हालसम्म चीनमा ३ हजार ३ सय ३६ ले ज्या न गु माइसकेका छन् । सं क्रमितको संख्या ८१ हजार ९ सय ७ पुगेका छन् । जसमध्ये ७७ हजार ४ सय ५५ निको भइसकेका छन् ।
यसैक्रममा जर्मनी, बेल्जियम, स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्डसलगायतका देशमा पनि को रोना सं क्रमणका कारण हजारौंले ज्या न गु माइसकेका छन् । यद्यपि, नेपालमा भने अहिलेसम्म को रोना सं क्रमणका कारण कसैले ज्या न गु माउनु परेको छैन । तर, सं क्रमितको संख्या ९ पुगिसकेको छ, जसमध्ये एक जना निको भइसकेका छन् ।